Somaliland: “Xafiis Kasta Waxa Yaalla Waraaqo Wasiiradii Shalay Xilalka Ka Tegay Saxeexeen, Sow Wax Lala Yaabo Maaha Inay Caayaan Waxay Gacantooda Ku Saxeexeen..” Wasiir Cali-MAREEXAAN - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Xafiis Kasta Waxa Yaalla Waraaqo Wasiiradii Shalay Xilalka Ka Tegay Saxeexeen,...
Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud ee Somaliland Cali Xasan Maxamed (Cali Mareexaan), ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta dalka in ay u meel dayaan hadallada ay warbaahinta marinayaan, gaar ahaan siyaasiyiinta dib u dhaliila xafiisyadii ay ka shaqayn jireen ee ay weli yaallaan saxeexyadoodu.
Wasiir Cali Mareexaan oo ka hadlayey munaasibad uu xilka ugu kala wareejinayey Maareeyihii hore ee wakaaladda waddooyinka iyo maareeyaha cusub, ayaa waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay siyaasiyiinta xilalka dawladda ka tegay ee haddana dhaliila xafiisyada dawladda, waxaanu u soo jeediyey inay dib u eegaan wixii ay ku hadli jireen markii ay xilalka hayeen iyo hadallada ay hadda Warbaahinta marinayaan ee ay ku dhaliilayaan shaqadii ay hore u hayeen.
Wasiirka Hawlaha Guud ee Somaliland Cali Xasan Maxamed oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi “Waxyaabaha aynu hadda baranay ee inagu cusub waxa ka mid ah qofbaa meel imanaya xil-buu joogaa, wuu ka tegayaa oo wixii uu shalay saxeexay ama uu shalay difaacayey ayuu caayayaa, waa waxyaabaha layaabka leh ee Warbaahintu yidhaahdaan Shalay iyo Maanta, markaa dhamaanteen waxaynu iska ilaalinaynaa in aan shalay iyo maanta la inala daba gelin.”
Cali Mareexaan oo u duur-xulaya Siyaasiyiinta hadda ka midka ah Xisbiga WADDANI ee hore Xilalka Wasiirnimo uga soo qabtay Xukuumadda ayaa yidhi “Xafiis kasta waxa yaalla waraaqo wasiiradii Shalay xilalka ka tegay ay saxeexeen, wixii ay gacantooda ku saxeexeen ayaad arkaysaa iyaga oo caayaya miyaanay wax lala yaabo ahayn.? Saddex sanno ka hor wasiirradii ka tegay xafiiskayga haddaan dib ugu noqdo way yaallaan waraaqihii ay saxeexeen hadda waa kuwa ugu qaylada badan. Hantida dawladda markay tahay iyo markay dhinac kasta tahayba way yaallaan waraaqihii ay saxeexeen, markaa nimanka hadlayaa ha is xasuustaan yaan shalay iyo maanta lala daba geline, waxaan leeyahay wixii aad shalay tidhina xasuuso, waxaad maanta ku hadlaysana xasuusnaw ayaan leeyahay”
Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud ee Somaliland